နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှား သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Zahairi Baharim အား ခေါ်ယူ ကန့်ကွက်စဉ် / Ministry of Foreign Affairs Myanmar
By ထွန်းထွန်း 1 August 2019
မလေးရှားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် မဟာသီယာ မိုဟာမက် ရခိုင်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ တဖက်သတ် စွပ်စွဲပြောကြားမှု ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ယမန်နေ့က မလေးရှားသံအမတ်ကြီးကို ခေါ်ယူ ကန့်ကွက်သည်။
မဟာသီယာမိုဟာမက်သည် ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့က တူရကီနိုင်ငံသို့ သွားရောက်စဉ် Anadolu သတင်းဌာန နှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ရခိုင်မြောက်ပိုင်း အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုများ ဖြစ်နေကြောင်း တဖက်သတ် စွပ်စွဲပြောကြားသည့် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Zahairi Baharim အား နေပြည်တော်သို့ခေါ်ယူကာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူက ကန့်ကွက် ပြောကြား ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးမြင့်သူက “စွပ်စွဲပြောကြားချက်များသည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အ သိုက် အဝန်းများ အကြား သဟဇာတဖြစ်မှုအတွက် ရေရှည်တည်တံ့မည့် အဖြေရရှိရန် မြန်မာအစိုးရနှင့် အာဆီယံတို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေမှုများကို အထောက်အကူမပြုကြောင်း၊ ထို့ပြင် တနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း မပြုရန်နှင့် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် နယ်မြေတည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို လေးစားလိုက်နာရန်ဟူသော အာဆီယံ၏ မူဝါဒများကိုလည်း သွေဖည်ရာရောက်ကြောင်း” ပြောခဲ့သည်။
ဦးမြင့်သူ ဦးဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အနေဖြင့်လည်း ဇူလိုင် ၂၇ ရက်နေ့က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ကော့ဘဇာရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ သွားရောက်ကာ စခန်းတာဝန်ရှိသူများနှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး နေရပ် ပြန်လာရေး ပြင်ဆင်းထားမှုအခြေအနေများအား ရှင်းလင်းပြောကြားမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ယင်းတွေ့ဆုံမှုအရ ဒုက္ခသည်စခန်းရှိ နေရပ်စွန်ခွာသူများနှင့် မြန်မာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်များအကြား ထပ်မံ တွေ့ဆုံမှု ပြုလုပ်ရန်လည်း သဘောတူညီမှုရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မဟာသီယာက Anadolu သတင်းဌာနနှင့် အင်တာဗျူးတွင် “ရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလို့ အသိ အမှတ်ပြုပြီး ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြည်နယ်အများအပြားနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံလည်း ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ် ဗြိတိန်က မြန်မာနိုင်ငံကို ပြည်နယ်တခုအဖြစ် အုပ်ချုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်နယ်မှာ လူမျိုးတွေ အများကြီးပါတယ်။ အခုတော့ သူတို့တွေကို နိုင်ငံသားတွေလိုဆက်ဆံသင့်တယ် ဒါမှမဟုတ် သူတို့ပြည်နယ်ထူထောင်ဖို့ သူတို့ရဲ့ ပိုင်နက်နယ်မြေကို ပေးသင့်တယ်”ဟု ပြောထားသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံအနေဖြင့် တခြားနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်လိုခြင်းမရှိသော်လည်း ရခိုင် မြောက်ပိုင်း မွတ်စလင် အရေးတွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု(သို့) လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုများ ပါဝင်နေပြီး မလေးရှားနိုင်ငံသည် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကို ဆန့်ကျင်ကြောင်းလည်း ၎င်းကပြောထားသည်။
မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် မဟာသီယာ အနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာခဲ့သူများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယမန်နှစ် က ကျင်းပခဲ့သည့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံတွင်လည်း မြန်မာအစိုးရအပေါ် ဝေဖန်ပြောကြားခဲ့ဖူးပြီး ၎င်း အနေဖြင့် ယင်းပြသနာများဖြေရှင်းရေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ စာရေးသားပေးပို့ခဲ့သော်လည်း အရေးတယူ အကြောင်းပြန်ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်းလည်း ပြောခဲ့သည်။
နေရပ်စွန်ခွာသူများနှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာအစိုးရဘက်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်သို့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ လတွင် စာရင်းပေးပို့ထားသည့် ၂၂၄၃၂ ဦးအနက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၂၄ ရက်နေ့အထိ ၁၉၀၁၄ ဦးအား စိစစ် ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း မြန်မာအစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူများအနက် ကျေးရွာအလိုက်စိစစ်ပြီး ပြန်လည်နေရာချထား ပို့ဆောင်ပြီးသူ ၃၄၅၀ ဦး စာရင်ကိုလည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်သို့ ဇူလိုင် ၁၁ ရက်နေ့က ပေးပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Topics: မလေးရှား, မွတ်စလင်, ရခိုင်